कोसीले बस्नै दिएन ! – Everest Dainik – News from Nepal
कोसीले बस्नै दिएन !
भदौ ४ । कुनै बेलाका जग्गावाल हुन् हरिदास तत्मा । अहिलेको बराह नगरपालिकामा कोशीको पूर्वतर्फ उनको झण्डै एक बिगाहा जग्गा थियो । उनीमात्र होइन, उनका बाबुबाजेले बसाएको त्यो बस्तीमा सयौं घर थिए । सप्तकोशीलाई त्यो चित्त बुझिरहेको थिएन ।
पश्चिमतिरबाट बगिरहेको कोशी २०२० सालपछि पूर्वतर्फ फर्कियो । २० वर्षको अन्तरालमा त्यो गाउँका सबै मानिस आफ्नो जग्गा कोशीलाई छाडेर हिँडे । उनीहरूको साथमा थियो त केवल लालपुर्जा । अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
उनले पछि प्रकाशपुरको चक्रघट्टी बजारमा जग्गा जोडे । ‘यहीँ हुर्कियौं, छोडेर जान मन लाग्दैन’, उनी भन्छन् । टप्पुमा तीन हजारभन्दा बढी घर परिवारका १० हजारभन्दा बढी मानिस बसिरहेका छन् । सबै खेती र पशुपालनमा निर्भर छन् । तर ती सबै कोशीको धारमा छन् । अर्थात्, उनीहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि कोशीले बगाउन सक्छ । कटानकै डरले केहीले टप्पु छाडे पनि अझै धेरै त्यहीँ छन् ।
ट्याग्स: Kosi, कोशी, कोसीले बस्नै दिएन